Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nigeria » Tweeting -ku waa xuquuq aadanaha - sidoo kale Nigeria
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • dhaqanka • Education • Entertainment • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Wararka Nigeria • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Ganacsatada Nayjeeriya, adeegsadayaasha ayaa cambaareeyay joojinta Twitter -ka ee dalka
Nigeria ayaa hoos u dhigtay shan dhibcood, 120, marka la eego 2021 Tusaha Xorriyadda Saxaafadda Adduunka oo ay soo ururiyeen Wariyeyaasha Aan Xudduudda Lahayn, taas oo ku tilmaamtay Nigeria inay tahay mid ka mid ah dalalka “ugu halista badan uguna adag” Galbeedka Afrika ee saxafiyiinta.
Dowladda Nigeria ayaa la filayaa inay bannaanka ka saarto Twitter 'dhawaan'.
Xayiraadda dowladda Nigeria ee Twitter ayaa si weyn looga cambaareeyay dalkaas.
Xorriyadda hadalka ayaa si xawli ah uga sii daraysa Nigeria.
Ka dib markii ay dhaleeceyn kala kulmeen isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha xadgudubyada xorriyatul qowlka iyo waxyeellada hababka ganacsi ee Nigeria, dowladda ugu dadka badan Afrika ayaa sheegtay inay 'filayso' inay xayiraadda ka qaado Twitter -ka, oo lagu dhawaaqay bishii Juun , “maalmo yar gudahood”.
Ku dhawaaqistu waxay kor u qaadday rajada dadka isticmaala Twitter -ka ee doonaya inay ku laabtaan baraha bulshada saddex bilood kadib markii la hakiyay.
Wasiirka warfaafinta ee Nigeria Lai Mohammed ayaa maanta u sheegay warbaahinta kadib golaha wasiirada in xukuumadda dalkaas ay ka warqabto walwalka Twitter mamnuucid ayaa ka dhex abuurtay dadka reer Nigeria.
"Haddii qalliinka la hakiyay illaa 100 maalmood hadda, waxaan kuu sheegi karaa inaan dhab ahaantii ka hadleyno dhowr, hadda dhowr maalmood oo hadda ah," ayuu yiri Maxamed, isagoo aan bixin waqti cayiman.
Markii la sii riixay, Mohammed wuxuu sheegay in mas'uuliyiinta iyo saraakiisha Twitter -ka ay tahay inay "calaamadiyaan I oo ka gudbaan T" ka hor intaan la gaarin heshiis kama dambeys ah.
"Waxay ahaan doontaa mid aad iyo aad u dhakhso badan, kaliya u qaado eraygayga taas," ayuu yiri wasiirku.
Dowladda Nigeria ayaa joojisay Twitter horraantii bishii Juun kadib markii shirkaddu ay ka saartay qoraal madaxweyne Muhammadu Buhari oo u hanjabayay gooni -u -goosatada gobolka, taas oo shirkadda weyn ee baraha bulshada ay sheegtay in ay ku xad -gudubtay xeerarkeeda. Xeer ilaaliyaha guud ee Nigeria oo sii hadlaya ayaa sheegay in dadka ka soo horjeestay mamnuucidda ay tahay in dacwad lagu soo oogo.
Iyagoo ka jawaabaya, daraasiin reer Nayjeeriya ah iyo koox u dooda xuquuqda maxalliga ah ayaa maxkamadda gobolka u gudbiyay dacwad ay ku doonayaan inay ka qaadaan xayiraadda dawladda ee Twitter -ka, iyagoo ku tilmaamay go'aanka lagu joojiyay hawl -gallada baraha bulshada ee aadka loo jecel yahay isku day lagu aamusinayo dhaleeceynta.